Njem njem njem a haziri ahazi na Europe dum | Njem akụkọ
A haziri ahazi njem njem nlegharị anya na Europe niile
Akụkọ Njem | 25/04/2022 17:36 | Getaways Europe
Ihe a na-ekwu metụtara ihe omume hiking akwụsịbeghị ịba ụba n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Ọrịa ọjọọ ma ọ bụ njide emeela ka ọtụtụ ndị mmadụ jiri okike na ohere njem nlegharị anya ọ na-enye kpọrọ ihe.
Ya mere, ụlọ ọrụ dị ka Ụzọ Orbis ha amalitela ịhazi njem njem njem na kọntinent Europe niile.
Jiri ohere ezumike mee ihe onyinye ụzọ ọtụtụ uru. N'etiti ndị ọzọ, omume nke egwuregwu, njikọ na ọdịdị na ọnụ ala dị ala ma e jiri ya tụnyere ebe ndị ọzọ bụ ụfọdụ n'ime ihe mkpali ndị ahịa na-eji. E wezụga nke ahụ, Europe nwere ọtụtụ akụkụ na okporo ụzọ juputara na ịma mma, na-enwe obodo anyị otu n'ime ụzọ ndị ama ama n'ụwa: Camino de Santiago.
1 Ụzọ ụkwụ ụkwụ kachasị mma na Europe
1.1 Santizọ Santiago
1.4 Ugwu Europe
Ụzọ ụkwụ ụkwụ kachasị mma na Europe
Orbis Ways, ụlọ ọrụ pụrụ iche n'ịhazi ụzọ ụkwụ, ewepụtala a ndepụta nke ebe kacha achọ site na ọha ndị Europe. N'ihi nnukwu ewu ewu ya, Camino de Santiago na-ewere ọnọdụ mbụ. Agbanyeghị, enwere ụzọ ndị ọzọ dị ịtụnanya ka ịmara kọntinenti Europe.
The Camino de Santiago bụ njem njem ebe ime mmụọ, okpukperechi na ọdịdị jikota n'ime otu echiche. N'ihi ebe ọ na-aga, Camino de Santiago nwere ọtụtụ ebe nnweta na ụzọ dị iche iche. Ya mere, ndị njem nwere ike ịhọrọ ịgbaso French, Portuguese, English, primitive ụzọ, wdg. N'ihe gbasara oke ala, nke Camino de Santiago si Sarria Ọ bụ ụzọ echekwara nke ọma, njem enwere ike ime n'ime ụbọchị 6, 7 ma ọ bụ 8.
Ihe dị iche iche nke Camino de Santiago, na ihe mere o ji adọta ọtụtụ puku ndị njem nleta kwa afọ, metụtara ya. agwa ime mmụọ. Ọ bụ ezie na afọ ole na ole gara aga, ọ bụ ụzọ nanị ndị kwere ekwe mere, taa, e nwere ọtụtụ ndị njem na-agba nzọ n'ụzọ a, n'agbanyeghị nkwenkwe nke onye ọ bụla. Ma ọ bụ na ụzọ ahụ jupụtara na ịma mma, ọ na-aga n'ime obodo na ụlọ arụsị nke nwere nnukwu akụkọ ihe mere eme ma na-enye gị ohere izute ndị si n'akụkụ dị iche iche nke ụwa. Na mgbakwunye, ụlọ ọrụ na-ewe ndị ọkachamara n'ịhazi ụzọ na-eme ka o kwe omume inwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na ụlọ nke ọ bụla n'enweghị nchegbu.
N'Oké Osimiri Atlantic, e nwere obere agwaetiti a ma ama ma mara mma nke ukwuu: Madeira. N'agbanyeghị na ndị mmadụ bi, àgwàetiti Portuguese nwere ọtụtụ Okirikiri ala na-amaghị nwoke nke okooko osisi na ọnụ ọnụ ugwu jikọtara na-acha anụnụ anụnụ nke oké osimiri. N'ihi nke a, n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ụzọ njem ya na-ewu ewu n'etiti ndị hụrụ okike n'anya.
Otu n'ime isi uru nke Madeira metụtara ya ihu igwe dị nro. Dị ka ọ dị na Canary Islands, Madeira nwere ihu igwe dị ka mmiri ọtụtụ afọ. E wezụga nke ahụ, ndị ụmụ anụmanụ anụmanụ na ahịhịa ha adịghị akwụsị ịmasị ndị njem, bụ́ nke a pụrụ ịnụ ụtọ site n’ụzọ nke ihe isi ike dị iche iche ekesara n’àgwàetiti ahụ nile.
Madeira nwere ike ileta gị n'onwe ya ma ọ bụ site na ụlọ ọrụ nhazi njem. N'okwu ikpeazụ, ụzọ ga-enwe a ndu nke ga-akọwa isi ihe ụfọdụ dị mkpa nke ọdịdị ala na ọdịdị okike nke agwaetiti ahụ.
Amalfi bụ obodo dị na ndịda Italy nke ekwuputara Ihe Nketa Uwa na 1997. Dị ka ọ dị na Spain mere na Ibiza ma ọ bụ Mallorca, Amalfi nwere mma na gafere njem nlegharị anya n'oge okpomọkụ na osimiri paradaịs. N'ezie, n'akụkụ a nke Italy anyị nwere ike ịhụ omenala ịkụ azụ obodo, ụzọ na pụtara ahịhịa na ndị a maara nke ọma «ụzọ chi», ụzọ mara mma nke na-ejedebe na echiche dị egwu nke oke osimiri Mediterenian.
N'ozuzu, Amalfi na-akwado ihe omume dị mkpa maka ndị njem nlegharị anya: site na obodo na obodo ndị mara mma ruo n'ụsọ osimiri nwere mmiri doro anya na nke paradaịs, site n'okporo ụzọ ugwu na ọmarịcha ala.
El Picos de Europa National Park na-ekpuchi nnukwu mpaghara obodo anyị. N'ịbụ nke dị n'etiti Asturias, Cantabria na León, mpaghara Picos bụ ebe obibi maka ụfọdụ anụ ọhịa na ahịhịa ndị dị mkpa na nchekwa na Spain, dị ka udele ajị agba. N'ihi nnukwu ndọtị ya, Picos de Europa nwere ụzọ ụkwụ ụkwụ dị mkpa mara n'ụwa nile, na mkpa pụrụ iche na ụzọ Cares ma ọ bụ ụzọ Picu Urriellu.
Njem nlegharị anya na Picos de Europa pụtakwara maka ya obodo siri ike iru (Bulnes ma ọ bụ Sotres) na nri ya dị egwu, ebe Cabrales cheese dị, n'enweghị obi abụọ ọ bụla, efere kpakpando. N'ihi nke a, ụlọ ọrụ ndị na-ahazi akwụkwọ njem njem, ihe ụtọ na ọbụna abalị na-anọ na ụlọ oriri na ọṅụṅụ mara mma.
Na mgbakwunye na ebe ndị a, ndị ahịa Orbis Ways na-edekwa ụzọ nke njem na Tenerife, Cinque Terre, La Palma, Menorca, La Gomera, Santander, Babiera ma ọ bụ n'ebe ugwu ọdịda anyanwụ n'ụsọ oké osimiri Gris.
Dịka ị na-ahụ, nhọrọ ahụ dị ọtụtụ, na ha niile gụnyere ihe omume ndị ọzọ na-abụghị ụzọ n'onwe ya. Kedu ihe ị na-eche ka ị mara Europe site na ọdịdị ya?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » A haziri ahazi njem njem nlegharị anya na Europe niile
Obodo kacha mma na Italy
Ihe ị ga-ahụ na Haro